🥇 Ukuzenzekelayo kokubalwa kwemali komkhiqizo wokuthunga
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 587
Ukuzenzekelayo kokubalwa kwemali komkhiqizo wokuthunga
Ividiyo ye-accounting automation yomkhiqizo wokuthunga
Oda i-accounting automation yomkhiqizo wokuthunga
Ukuzenzekelayo kokubalwa kwezimali zokukhiqiza kwenza lula impilo yabaninimabhizinisi kanye nama-ateliers futhi kubavumela ukuthi bahambisane nesikhathi. I-USU ngokungangabazeki ingumholi phakathi kwezinhlelo ezizenzakalelayo futhi ifanelwe ukunakwa. Umbuso wethu wenzelwe ukuthi noma imuphi umsebenzisi angakwazi ukukuthola ngaphandle kokungena ngokujulile ezintweni eziyisisekelo zokuthunga okuzenzakalelayo. Futhi inzuzo yayo enkulu ilele ekutheni manje ukusetshenziswa kwemishini nokuthungwa kukhiqizwa ezingeni eliphakeme, elifanele. Siyaqonda ukuthi, okokuqala, isoftware ekhethekile kufanele ihehe umsebenzisi kalula ngokuphathwa nokufinyeleleka ekuqondeni, akumele kuthathe isikhathi esiningi ukufunda izisekelo zokusebenza kuhlelo, ukuba nemisebenzi ehlukahlukene, kepha ngasikhathi sinye isikhathi sibe lula. Ukuzenzakalela kokubalwa kwemali kokukhiqizwa kokuthungwa ku-1C manje sekuyinto ejwayelekile. Kepha ingabe inkampani yakho iyaludinga ngempela lolu hlelo oluyinkimbinkimbi oludinga izilungiselelo eziningi, ukwesekwa okuqhubekayo okuvela kochwepheshe nokuqeqeshwa okuyimpoqo kwabo bonke abasebenzi? Ngokusobala, konke lokhu okungenhla kudinga izindleko ngokuqhubekayo, ngenkathi ukuthengwa kwesistimu yethu yokubalwa kwezimali kungasho noma iyiphi imali yokubhalisa phakathi naso sonke isikhathi sokusebenza, futhi noma ngubani angayisebenzisa - kusuka kumthengisi kuya ku-accountant. Akunasidingo sokunqoba ubunzima, kwanele ukwenza ukhetho ngokuvumelana nohlelo lwendawo yonke olukuvumela ukuthi ukwandise izinqubo zokukhiqiza ngaphandle kwezindleko ezinkulu zezezimali nezinsizakusebenza.
Ukukhiqizwa kokuthunga kuhlale kusekelwe ku-multistage. Ngakho-ke, i-automation yayo ngokuyinhloko ilandela umgomo wokulawula okuphelele kuzo zonke izigaba zayo. Lokhu kukuvumela ukuthi ubone isithombe sangempela futhi, ngesisekelo saso, wenze noma yikuphi ukulungiswa ebhizinisini lakho. Ngasikhathi sinye, ukubalwa kwemali kungenziwa ngaphakathi kwebhizinisi elilodwa nangenethiwekhi yamagatsha, kusetshenziswa ukuvumelanisa idatha okulula kwi-Intanethi. Ebhizinisini lokuthunga, lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi, ngoba zonke izigaba zomsebenzi, njengomthetho, zihanjiswa phakathi kwabasebenzi abahlukene. Uma zonke zisebenza ohlelweni lokuzenzakalela, lokhu kuqinisekisa ukuqhubeka, kuqedwe noma yimaphi amaphutha, futhi kuqinisekise nokuba sobala kwazo zonke izenzo.
Uhlelo lwethu lokusebenza lokuphathwa kwemishini kanye nokuzenzekelayo kokubalwa kokukhiqizwa kwemali kanyekanye kuba yisisekelo samakhasimende nabaphakeli, kusiza ukugcina ukubalwa kwezinsizakusebenza nezesekeli futhi kubalwa izinga lezitoko ezidingekayo, ukuqapha imisebenzi yabasebenzi, ukusabalalisa ama-oda phakathi kwabo, hlola ukusebenza kahle kwabasebenzi. Ngokwesisekelo sayo, uyakwazi ukuxhuma nokusebenzisa imishini yokuhweba eyengeziwe, ukwenza indawo yokusebenza yomphathi wemali, ukugcina ama-accounting ezezimali amarisidi nezindleko, ukusebenza nabakweletayo.
Ukuhlola ukukhiqizwa kwemishini ebhizinisini lakho lokuthunga, umsebenzi wokusebenza nemibiko uyasiza: ungaqhutshwa ngesisekelo sanoma yiziphi izinkomba, futhi yonke imininingwane yethulwa kuwe ngokubukeka: amatafula, amagrafu, imidwebo.
Ngasikhathi sinye, ukubalwa kwezimali kohlelo lokuzenzekelayo lokukhiqiza ukuthunga futhi kuyithuluzi elinamandla lokusebenza kwinkonzo yamakhasimende: isisekelo samakhasimende se-elekthronikhi, ukuphrinta okuzenzakalelayo kwamafomu amadokhumende, ukwaziswa kokulungela kwe-oda noma izigaba zokuqaliswa kwalo, ukukhushulwa nokunikezwa, izaphulelo kanye nokwenza ngezifiso uhlu lwamanani.
Umbuso wethu awusebenzi nje kuphela, kepha ucabangela izici zebhizinisi ngalinye, uvumelanisa, ikakhulukazi, nebhizinisi lokuthunga, okufakazela ukusebenza kwalo kusukela ezinsukwini zokuqala.
Ngezansi uhlu olufushane lwezici ze-USU. Uhlu lwamathuba lungahluka ngokuya ngokucushwa kwesoftware ethuthukile.
Ukufakwa okulula kohlelo, ukuqala okusheshayo, ukungazweli kudatha yohlelo lekhompyutha;
Isikhathi sokuzivumelanisa nokusebenza ku-automation sincane; ungaqonda isoftware bese usetha inqubo ezenzakalelayo ngosuku olulodwa nje;
Ngokungafani nezinye izinhlobo eziningi zezicelo, i-USU ayidingi ukutshalwa kwezimali njalo; ukhokha kuphela ukuthengwa kohlelo olunebanga eligcwele lezinketho;
I-automation kanye nemishini yezinqubo zokuthunga ikuvumela ukuthi ubheke ukukhiqizwa;
Ukuzenzakalela kukusiza ukuthi usungule ukugeleza kombhalo ngogesi;
Usebenzisa isicelo, ungaqhuba ukusungula kanye nokuqapha ukunyakaza kwesitoreji;
Ukuhlaziywa kokukhiqizwa kwezingubo eziphelile kuthuthukisa imisebenzi yabasebenzi; basabalalise isikhathi sabo sokusebenza ngokufanele;
Ukusebenza kwabasebenzi kuhlukaniswe ngokusobala ezindaweni zemisebenzi;
Umsebenzi ngamunye angaba namalungelo ahlukile okufinyelela ngokuya ngesikhundla negunya;
Amamojula aqopha isikhathi sokwenza imisebenzi ngesisebenzi ngasinye ngokwehlukana;
Ithebula labasebenzi lakhiwa, kususelwa kwimininingwane efakiwe, kubalwa iholo lehora noma le-piecework;
Umsebenzi wamagatsha wokukhiqiza uvumelanisiwe; izindlela zokuxhumana phakathi kwabasebenzi zilungisiwe;
Ukuzenzakalela kokusebenza kokuthungwa kwesicelo sokubalwa kwemali kukwazi ukucubungula kalula ulwazi oluningi futhi kwenziwe imisebenzi eminingi;
Kulula kakhulu ukusetha i-elekthronikhi okumele yenziwe, kanye nesistimu yesaziso nesikhumbuzi;
Imibiko ingakhiwa ngokuzenzakalela ngokumane ubeke isheduli oyifunayo kanye nenqubo yayo;
Uhlelo lokusebenza luhlinzeka ngokugcina okuthembekile nokukopisha okufika ngesikhathi kolwazi lonke olubalulekile;
Onke amagatsha kanye neziqeshana zebhizinisi lokuthunga zihlelwe zaba yinkimbinkimbi eyodwa, ngenkathi ukusebenza kwazo kuchazwe ngokusobala;
Ukuhlaziywa kwedatha ku-automation ye-accounting accounting kwenziwa ngokuqhubekayo, umbiko ngamunye ungenziwa nganoma yisiphi isikhathi nangomongo wanoma yiziphi izinkomba ngokuya ngemiphumela.
I-atelier kanye nokuthungwa
Ukuzenzakalela kwe-accounting kwesitudiyo sokuthunga
Ukubalwa kwezimali ngomhlangano wokusebenzela wokuthunga
Ukubalwa kwemali ngokukhiqizwa kwengubo
Ukubalwa kwezimali ngokusetshenziswa kwezicubu
Ukubalwa kwezimali ku-atelier
Ukubalwa kwezimali endaweni yokusebenzela yokuthunga
Ukubalwa kwamakhasimende we-atelier
Ukubalwa kwama-oda we-atelier
Ukubalwa kwamakhasimende lapho kuthungwa
Ukubalwa kwezindleko zokukhiqizwa kokuthungwa
Ukubalwa kwezindleko embonini yezingubo
Ukubalwa kwemali kwendwangu
Ukubalwa kwezimali kokukhiqizwa kwengubo
Ukubalwa kwama-oda lapho kuthungwa
Ukubalwa kwemali ngokukhiqizwa kwezingubo
Accounting of ukuthungwa
Ukubalwa kwezimali zokuthungwa nokulungiswa kwezingubo
Ukubalwa kwemali yendlu yemfashini
Uhlelo lwe-Accounting lwesitolo esidayisa izingubo
Uhlelo lwe-Accounting lweshabhu lokuthunga
Uhlelo lwe-Accounting lwe-atelier
Uhlelo lwefektri yezembatho
Uhlelo lokusebenza lokubalwa kwemali ekukhiqizweni kwengubo
Uhlelo lokusebenza lwe-atelier
Uhlelo lokusebenza lendlu yefashini
Uhlelo lokusebenza lokukhiqiza ukuthunga
Uhlelo lokusebenza lokusebenzela lokuthunga
Uhlelo lokusebenza lwe-Atelier accounting
Uhlelo lwe-Atelier automation
Uhlelo lokulawula i-Atelier
Ukuzenzakalela kokubalwa kwezimali kwe-atelier
Ukuzenzakalela kokubalwa kwezimali kokuthungwa
Ukukhiqizwa kokuthunga okuzenzakalelayo
Ukuzenzekelayo kohlelo lokuthunga
Isisekelo seklayenti sokukhiqiza ukuthunga
Izingubo zokuthunga ezishintshayo
Ukuphathwa kokukhiqizwa kwezingubo
Ukuzenzakalela okuyinkimbinkimbi komkhiqizo wokuthunga
Uhlelo lwekhompyutha lokukhiqiza ukuthunga
Ukulawulwa kwezingubo zokuthunga
Ukulawulwa kwesheduli yomsebenzi womkhiqizo wokuthunga
I-Crm yokukhiqizwa kwengubo
Landa uhlelo lokukhiqiza ukuthunga
Landa uhlelo lwe-atelier
Imfashini yendlu ezenzakalelayo
Ukulawulwa kwendlu yemfashini
Ukubikezela nokuhlela ekukhiqizeni kokuthunga
Ukubikezela ekukhiqizeni izingubo
Uhlelo lwamahhala lwesitolo esithungayo
Ingubo umkhakha ukuphathwa
Ungawaheha kanjani amaklayenti ku-atelier
Uwagcina kanjani amarekhodi ku-atelier
Uhlelo lolwazi lwe-atelier
Ukwaziswa kokukhiqizwa kwengubo
Ukuphathwa kwezimali ekukhiqizweni kwengubo
Ukuphathwa komhlangano wokusebenzela
Ukuphathwa komkhiqizo omncane wokuthunga
Ukuphathwa kwendlu yemfashini
Ukuphathwa kohlelo lokuthunga
Ukusebenziseka kokukhiqizwa kwengubo
Ukuhleleka nokuhlela ekukhiqizeni kokuthunga
Inhlangano yokubalwa kwezimali ekukhiqizweni kwezingubo
Inhlangano yabaphathi ku-atelier
Inhlangano yomsebenzi ekukhiqizeni ukuthunga
Inhlangano yomsebenzi we-atelier
Ukuhlela ekukhiqizeni kokuthunga
Ukulawulwa kokukhiqizwa kokulungiswa kwezingubo
Ukulawulwa kokukhiqizwa kwendawo yokusebenzela yokuthunga
Izinhlelo zokubalwa kwezimali zokuthungwa
Uhlelo lwe-accounting ekukhiqizeni kokuthunga
Uhlelo lokulawulwa kwe-atelier
Uhlelo lokuthunga izingubo
Uhlelo lokulawulwa komkhiqizo wokuthunga
Uhlelo lokulawulwa kwenkundla yokusebenzela yokuthunga
Uhlelo lwemboni yengubo
Uhlelo lokuphathwa kwezingubo zokuthunga
Uhlelo lokuphathwa kwesitolo esithungayo
Uhlelo lokuphathwa komkhiqizo wokuthunga
Uhlelo lwebhizinisi lokuthunga
Uhlelo lokukhiqizwa kokuthungwa
Uhlelo lomkhakha wezembatho
Uhlelo lwebhizinisi lezingubo
Uhlelo lwendlu yemfashini
Uhlelo lokukhiqizwa kwezingubo
Uhlelo lwe-salon yemfashini
Uhlelo lomkhakha wokuthunga
Uhlelo lomhlangano wokuthunga
Uhlelo lokuphendula izicubu
Ukuthunga uhlelo lokubala imali
Ukuthunga uhlelo lwe-atelier automation
Ukuthunga isoftware yebhizinisi
Uhlelo lokulawula ukuthunga
Ukulawula ukukhiqizwa kokuthunga
Ukuphathwa komkhiqizo wokuthunga
Ukuthunga uhlelo lokulawula isitolo
Ukuthunga okuzenzakalelayo kweworkshop
Isoftware yomkhiqizo wokuthunga
Uhlelo lwesitudiyo sokuthunga
Uhlelo lwendawo yokusebenzela yokuthunga
Amathebula ekhaya fashion
Amathebula womkhiqizo wokuthunga
Uhlelo lokusebenzela ukufundisa
Yini edingekayo ukuze i-atelier isebenze